Ukwahlukana kukuthambekela kwamamolekyu ukuba asasaze ukuze athathe indawo ekhoyo. Ama-Gasses kunye nama-molecule kwi-liquide ayenomdla wokutshatyalaliswa kwimeko engqongileyo kwiindawo eziphantsi. Izothutho ezinqabileyo ukuhanjiswa kwezinto kwi-membrane. Le nkqubo yenzeke kwaye amandla eselula ayenziwanga. Iimleksile ziza kusuka apho i-substance ixhomekeke khona apho ingaphantsi.
Isantya sokusasazeka kwezinto ezahlukeneyo sichaphazeleka yi-membrane. Ngokomzekelo, amanzi ahlukana ngokukhululeka kwiimbumba zeeseli kodwa ezinye iamolekyu azikwazi. Kufuneka bancedwe kuwo wonke umlenze weselula ngenkqubo ebizwa ngokuba yenziwe ngokusasazeka .
I-osmosis yimeko ekhethekileyo yokuthutha okungahambiyo. Amanzi ahluke kwi-membrane engummiselo, ovumela ezinye iamolekyu ukuba zidlule, kodwa kungekhona abanye. Kwi-osmosis, ulwalathiso lwamanzi okuhamba lujoliswe ngxinaniso yokucoca. Amanzi ahluke kwi-hypotonic (isisombululo esincinci se-solute) isisombululo kwi-hypertonic (i-concentration).
Iinkqubo ezininzi ezenzeka ngokwemvelo zithembela kwi-molecule. Ukuphefumula kubandakanya ukusasazeka kwe-oxyses (i-oksijini kunye ne-carbon dioxide) ngaphakathi nangaphandle kwegazi . Emiphakeni , i-carbon dioxide iyahlukana ukusuka egazini ukuya emoyeni kwi-lung alveoli. Iiseli zegazi ezibomvu zibopha i-oksijini eyahlukeneyo emoyeni egazini.
I-oksijeni kunye nezinye izondlo egazini zithunyelwa kwiimfucu apho igalelo kunye nezondlo zitshintshana. I-carbon dioxide kunye ne-disk ephuma kwiiseli zamathambo zibe ngegazi, ngelixa i-oksijeni, i-glucose kunye nezinye izondlo egazini ziyahlukana kwiisisu zomzimba. Le nkqubo yokwahlukana ivela kwiibhedi ze-capillary .
Ukusasazeka kwakhona kwenzeka kwiiseli zityalo . Inkqubo ye- photosynthesis eyenzeka kumagqabi ezityalo kuxhomekeke kwi-dispersion of gasses. Kwi-photosynthesis, amandla okukhanya kwelanga, amanzi kunye ne-carbon dioxide asetyenziswa ukuvelisa i-glucose, i-oksijini kunye namanzi. I-carbon dioxide iyahlukana ukusuka emoyeni ngokusebenzisa ama-pores amancinci kumagqabi ezityalo ezibizwa ngokuba yi-stomata. I-oksijeni eveliswa yi-photosynthesis ihluke kwi sityalo ngokusebenzisa i-stomata kwi-atmospheric.
Imizekelo ye-osmosis ibandakanya ukubuyiswa kwakhona kwamanzi ngamathambo e- nephron ezintsheni , ukubuyiselwa kwakhona kwamanzi e-capillaries, kunye nokuxutywa kwamanzi ngeengcambu zezityalo. I-Osmosis ibalulekile ukutyala ukuzinza. Izityalo ezinama-Wilted zibangelwa ukungabikho kwamanzi kwiindleko zokutshala izityalo . Ii-vacuoles zinceda ukugcina izakhiwo zezityalo ngokuqinileyo ngokunyusa amanzi kunye nokunyanzelisa iindonga zeseli zezityalo. Amanzi ashukunyayo kwiimbumba zeeseli zezityalo nge-osmosis inceda ukubuyisela isityalo kwindawo ephakamileyo.
Ukuguqulelwa: Inkcazo kunye nemizekelo
"I-Cubi Rubik's Grand Cube" -Isibonelo seSicelo soLuntu oluPhezulu, Inketho # 4